Akunakwenzeka ukuthi noma ngubani ozophikisana neqiniso lokuthi amabhuleki angenye yezingxenye ezibaluleke kakhulu kunoma imuphi imoto. Futhi, ikakhulukazi, ibhayisikili. Amabhayisikili amabhayisikili anomthwalo omkhulu. Bayibophezele impilo, futhi ngezinye izikhathi ngisho nokuphila komuntu. Ngakho-ke, lapho uthenga ibhayisikili, kufanelekile ukunaka ikhwalithi yabo. Umshayeli wamabhayisikili ongenalwazi, lapho efika esitolo, angahle adideke ezinhlobonhlobo zezinhlelo. Ngakho okokuqala udinga ukuthola ukuthi yiziphi ama-brakes nokuthi zingahluka kanjani komunye nomunye.
Imakethe yebhayisikili ikhula ngokushesha futhi ikhula. Njalo ngonyaka, kunezobuchwepheshe obusha obuningi, izixazululo kanye nezingxenye ezisele. Ngakho-ke, ezinye zemininingwane ziphela futhi zingamelani nokuncintisana. Namuhla sizoxoxa ngalezo zinhlobo zamabhayisikili okukhwabanisa amasistimu asetshenziselwa ukusebenza esikhathini sethu.
Ngakho, amabhuleki ebhayisikili angamahlobo anjalo:
I-Rim (ehlukaniswa ngayo ihlukaniswe ibe: i-cantilever, umkhaza, u-hydraulic, ne-W-break).
I-disk (kukhona: imishini kanye nemishini).
Ngokwezigaba zikazwelonke, uhlobo lokuqala lubizwa ngokuthi i-pedal brake, kanti abanye - ngesandla. Manje sizozihlaziya ngokuhlukana kwezinhlobo zezilwane.
Lolu hlobo luyaziwa abaningi kusukela ebuntwaneni. Lezi zikebhe zafakwa ngebhayisikili evelele "Ukraine", kanye namabhayisikili ezingane "Eaglet", "Swallow" nabanye. Ngokuvame ukubizwa ngokuthi i-back or pedal. Lokhu kuyiqiniso, ngoba itholakala engxenyeni yesondo elingemuva futhi ivuliwe ngokuguqula izinyawo ngezinhlangothi ezibhekene nesifo. Ngenxa yendlela yokujikeleza imoto ngakolunye uhlangothi, ama-pads ahlaziyekile afakwe ngaphakathi kwidubhu adutshulwe futhi igubhu licindezelwa. I-braking ibangelwa amandla okukhathala phakathi kwezicathulo kanye nodubhu. Kuze kube manje, lezi zinhlobo zisetshenziselwa imodeli yebhayisikili yezingane, kanye namamodeli asebhajethi amabhayisikili amadala asezindaweni zasemadolobheni.
Izinzuzo zama-brake amabhasi:
Ukuzinza . Kubhekwe ikakhulukazi ukuthi umswakama, uthuli kanye nokungcola cishe akufaki indlela yokuvalwa.
I-drum breaker ayifuni ukugqoka isondo.
Ukulula . Amabhuleki anjalo awadingi ukugcinwa njalo.
Sebenza ngisho nasesikhathini sokuvinjelwa kwesondo , akudingi ukulungiswa okuhle.
Ukuze unciphise, kudingeka wenze imizamo emikhulu.
Ukungakwazi ukusebenzisa onobuhle bemikhumbi yebhayisikili.
Ukuba khona kwendawo efile. Ngesimo esiqondile sezinduku zokuxhuma, ukubhujiswa akunakwenzeka.
Uma uchungechunge lwehla luvela e-sprocket, i-brake izoyeka ukusebenza.
Ibhayisikili yebhayisikili yebhayisikili ayivumeli ukuqhuma okukhulu. Ngesikhathi sonke isikhathi sesibili sibalwa, kubaluleke kakhulu.
Amabhuleki adrum asetshenziselwa amabhayisikili ahamba phambili. Uma ngabe lolu chungechunge luya phansi, ngenetha lokuphepha, abantu abaningi bafaka isondo elingaphambili nge-brake eyengeziwe yohlobo oluhlukile.
Ukushisa amabhayisikili amabhayisikili
Umgqomo we-drum brakes kancane kancane ungasebenzi. Futhi izikhundla ezihamba phambili emakethe kukhona izigubhu kanye nama-disc brakes. I-Rim yanamuhla ijabulela ukuthandwa kakhulu, ngoba iyasebenza kakhulu kunokudubha ne-disk eshibhile. Isimiso sokusebenza kwalesi simiso silula: uma umqhubi webhayisikili eshaya isibambo esiphezu kwezimbambo, kudonswa ikhebula elidlulisela amandla emibhoshini yokuqhuma, futhi futhi, cindezela amaphuzu ngokumelene nomgqa wesondo. Lapha, futhi, amandla okuphikisana asebenza. Manje ake sikhulume kabanzi mayelana nohlobo ngalunye lwama-brake we-brake.
Le ndlela iqukethe ama-lever amabili, ngalinye lalo liye laphuza amaphuzu. Ama-levers afakwe kuma-pivots emfolokheni. Ngosizo lwezintambo ezimbili ikhebula lihambisa ama-lever abambe amaphuthi. Idivayisi inokwethenjelwa futhi ilula, kodwa itholakala kumabhayisikili anamuhla konke okuncane. Ezinye izinhlobo, ngeendlela ezisebenza kahle, kancane kancane ziyisondeza.
Amabhuleki wamabhayisikili alolu hlobo ajwayele ukusetshenziselwa onobuhle bemikhumbi yebhayisikili. Igama labo lifanekisela kahle umklamo: ama-pads agxiliwe ngokumelene nombuthano ngezingwegwe ezigobile ezibukeka kakhulu njengemikhaza. Amabhuleki okugcoba, kanye nama-cantilevers, kancane kancane aphelelwe yisikhathi.
Ama-brake we-hydraulic brake
Ngokungafani nezinhlobo ezimbili ezedlule, ekwakheni ama-brake anjalo azikho izitshalo ezijikelezayo lapho kufakwe khona amathangathi, kanye nezintambo eziqhuba levers. Isimiso sokusebenza lapha sihlukile kakhulu. Esikhathini sokubhukuda kwe-brake esesibhashini, kukhona isilinda esinamanzi. Uma ucindezelekile, udlula emashubhu akhethekile kuya ekucindezelweni kwamagileli amabili aphakanyiswe ipulaki. Lezi zindwangu zishintsha amaphuzu ngendlela eqondayo ngokuphathelene nomgqa, okwenza kube khona ukungqubuzana nokuqhuma. Amabhuleki wamabhayisikili alolu hlobo asebenza kakhulu, ngakho asetshenziselwa ukuhlolwa. Ngenxa yesisindo esindayo, ubunzima bokulondeka, ukuguquguquka okungalungile (ikhono lokwenza umthamo wokubhukuda ngesibambo) nokulungiswa esimweni esinzima sezulu, ama-brake we-brake we-hydraulic awavunyelwa kwezinye izinhlobo zebhayisikili.
Njengemikhonzo yokuhlola nokubuyekeza, lolu hlobo oluvame kakhulu lwamabhuleki e-brake kuze kube yimanje. Ngomgomo womsebenzi, zikhumbuza kakhulu i-cantilever. Intambo ihanjiswe ohlangothini, phezulu kwesinye sezindiza zokuxova. Lapho isibambo sicindezelekile, ama-lever lapho i-cartridge ipads efakwe khona ifinyelela komunye nomunye futhi imisa isondo. Ngenxa yokuphoqa okuhambisanayo kwezicathulo, i-braking iyasebenza kakhulu. Amaphuleki webhayisikili e-Cartridge athathelwa kalula yi-hexagon elula.
Njengoba lolu hlobo lwamabhuleki e-brake luvame kakhulu emakethe yanamuhla, masihlale emininingwane eminingi ngezinzuzo nezinkinga zayo, ezimakwe ngabasebenzisi.
Design design elula futhi ephumelelayo, ukuhlinzeka okuhle braking force.
Isisindo esincane uma kuqhathaniswa nodubhu ne-disc brakes.
Ngaphandle kokushiyeka, kwakukhona futhi:
Nciphisa ukusebenza kahle lapho umswakama kanye nokungcola kungena emgqeni.
Ukusheshisa ukugqoka ukugqoka uma kwenzeka ukungcola.
Ukungakwazi ukusebenzisa amathayi amaningi.
Uma isondo lingenalutho (linama "ayisishiyagalombili"), kunzima ukusetha amabhuleki alolu hlobo lomsebenzi wekhwalithi.
I-Disc Bicycle Brakes
Ama-disc brakes athuthela embonini yebhayisikili embonini yezimoto nezithuthuthu. Njengoba ukubuyekezwa kwabagijimi nezakhamuzi ezivamile kubonisa, lezi zinhlobo zisebenza kakhulu. Kuye ngokushayela, ama-brakes e-disk angaba yindlela yokusebenza nemishini. Esikhathini somshini we-mechanical, amandla avela esibambini kuze kube se-brake adluliselwa ngekhebula, futhi kuyi-version hydraulic ngokusebenzisa uhlelo olugcwele uketshezi. Kuzo zombili izinhlobo zama-brake, amandla ekugcineni awela emaphethini acindezela i-disk ekhethekile ekhonjiwe ku-bushing.
Ngakho, i-disk brake iqukethe i-rotor (i-disk) ne-caliper (umshini wokuwasha). I-Rotors ingaba nobubanzi buka-140 kuya ku-220 mm. Ukuphakama kwalolu lwazi, ukuphakama kwengalo yesibindi nokusebenza kahle kakhulu. I-caliper ifakwe kuhlaka noma ukuqhuma. Ngaphakathi kukhona ama-pads afakiwe, asebenzayo nge-pistons ekhethekile. Amapayipi amabhayisikili ama-disc brakes akhiwa ngezinto eziphilayo noma metal sawdust. Ikhetho lokuqala livumela ukuqhuma okushelelekile futhi ukugubha ngokushesha, futhi okwesibili ugaxekile omude futhi ubeke isikhathi eside.
Ama-brake ye-mechanical disc, ekwahlulelwa yizibuyekezo, zinenzuzo enjalo:
Nikeza ukukhwabanisa okunamandla kunokuba kunamarandi.
Vumela ukulawula amandla we-braking.
Sebenzisa kuzo zonke izimo zezulu. Uthuli, ukungcola nomswakama cishe akuthinti izinga le-braking.
Ungaphazamisi ukusetshenziswa kwamathayi amaningi.
Ukusebenza ngempumelelo emgqeni ogobile.
Ukukhonza isikhathi eside.
Awudingi isondlo esikhethekile.
I-rotor ilula kakhulu kunama-brake we-hydraulic.
Amakhodi awadingi ukusebenza okukhethekile, ngokungafani ne-hydrolysines.
Yiqiniso, ukubuyekezwa nakho kubhala ukwehluleka:
Akulungisiwe ensimini ngaphandle kwethuluzi elikhethekile.
Ngenxa yezinhlobonhlobo zamamodeli nokuguqulwa, ukusesha izingxenye zokuphumula kunzima kakhulu.
Ngesikhathi sokuhamba kwebhayisikili engaphazamiseki, amathuba okuvinjelwa kwe-rotor kunoma yimuphi umthelela wamashini ophezulu.
Ngezinye izikhathi kuvimbela okunamathiselwe kwesithwala sebhayisikili.
Banesisindo esiningi ngokuqondene namabhuleki.
Izindleko ziyabiza kakhulu kunamamodeli womhlanga.
I-Disc hydraulic bicycle brakes inezinzuzo ezifanayo njengama mechanical, kanye neyodwa eyabo:
Ibandla elinamandla kunazo zonke lokuqhaqhaza phakathi kwazo zonke izinhlobo.
Ukulawula kahle amandla okubhabhisa.
Sebenzisa kuzo zonke izimo zezulu.
I-stroke elula yokugoqa insimbi.
Ukungahleleki kwamabhuleki omzimba:
Ukulungiswa kwe-waterline kuyinkinga enkulu.
Endabeni yokwehlukaniswa kwe-rotor kunzima ukuvumelanisa.
Intengo ephakeme ngokuhlobene nezinye izinhlobo.
Ngaphezu kwalokho, amabhisikidi e-diski ayenamaphutha anemiphumela efanayo efanayo neyomshini.
Njengomthetho, amabhayisikili asevele athengiswa ngebhayisiki. Ngakho-ke, akudingekile ukuphazamisa ngaphezu kokukhetha kwabo kumthengi ojwayelekile. Ochwepheshe bathanda ukuqoqa ibhayisikili kusuka kwabaningi abayithandayo imininingwane. Esimweni sokuqala, kufanelekile ukucabangela amaphuzu amaningana. Okokuqala, umenzi webhayisikili yiyona eqinile eyenza uhlaka lwawo namasondo. Izingxenye ezisele, kuhlanganise nama-brake, zithengwa kwamanye amabhizinisi. Amafemu amaningi akhiqiza amabhayisikili, angawagcoli izingxenye ezinhle kakhulu ukuze alahle izindleko zebhayisikili esiphelile. Cabanga ngalokhu uma uthenga. Okwesibili, uhlobo lwama-brakes luxhomeke kuhlobo lwebhayisikili. Isibonelo, kumabhayisikili omgwaqo angabizi kakhulu, njengombuso, amabhuluki amagoli. Zingahlanganiswa namabhuleki angaphambili ebhayisikili ofanayo. Ngama-bhisikidi entaba aphansi abeka ama-brake W-break, futhi izindleko ezibizayo, njengombuso, zinama-disc a-disc. Okwesithathu, izinkampani ezisebenza ngamabhayisikili izingxenye ezithintekayo, zingaveza izimpahla ngamanani ahlukene. Isibonelo, uma ubuza umthengisi esitolo ukuze abonise amabhayisikili e-Shimano amabhayisikili, angathatha ibhokisi lonke lemikhiqizo, ehlukile ekuklanyeni nasezingeni.
"I-Saiga 308": isibhamu esihle esidala salo mdlalo omusha wezikhali zempi
Indlela yokukhetha i-moto yokuqala
Ileus Dynamic: ngezigaba, izimbangela, izimpawu kanye nokwelashwa
Ihhotela Dessole Sea Lion Beach Resort 4 * (Vietnam): incazelo, izithombe kanye nokubuyekeza
Uyini ibutho abakhwele amahhashi? Umlando abagibele amahhashi Russian